Uma uhlela iholidi in Greece ke, sicabanga kukho ezifanele kakhulu kuwe, qiniseka cabanga Alexandros Palace Ihhotela Suites (Halkidiki, Mount Athos). Kulesi sihloko sifuna ukukhuluma ngalokhu ukuthuthukiswa ngokuningiliziwe, ube ophelele okuningi ngayo.
Alexandros Palace Ihhotela Suites 5 * (Greece) ubhekwa izindawo best for iholidi in Halkidiki. A inzuzo elikhulu futhi elingenakuphikwa leli hhotela indawo yayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi eziyinkimbinkimbi endaweni olunothile kakhulu. It uzungezwe izintaba, zasemazweni aluhlaza kanye crystal ulwandle ecacile. Futhi ngempela endaweni ihhotela kahle ahlotshiswe isitayela wesimanje.
Njengoba ungase uqonde, Alexandros Palace Ihhotela Suites itholakala enhlonhlweni kweNtaba Athos, endaweni Tripiti, ezintathu nje ukusuka Nea Roda futhi amakhilomitha amahlanu ukusuka edolobheni Ouranoupolis. Kusukela eziyinkimbinkimbi komngcele republic wezindela amakhilomitha ayisishiyagalolunye. Ibanga kuya sezindiza saseMakedoniya e Thessaloniki, eziyikhulu nesishiyagalombili futhi amakhilomitha, ngakho-ke lokhu kuzothatha isikhathi ukuthola indawo yokuphumula. Empeleni, lo akunankinga, ngoba ungenza yokudlulisa. Ngeke ulindele ibhasi ukhululekile ukuthi kukuthatha Alexandros Palace Ihhotela Suites 5 * (Halkidiki, Mount Athos). Emgwaqweni imoto akuthathi ngaphezulu kwesigamu sehora (ibhasi isikhashana). Abanye amaholide bayathukuthela ukuthi uhambo kufanele angachitha isikhathi eside kangaka.
Alexandros Palace Ihhotela Suites unensimu enkulu uzilungise. nambili ezintathu storey izakhiwo, kanye ayisishiyagalolunye kabili emphemeni liyingxenye eziyinkimbinkimbi. Amagumbi 243 iqukethe amafulethi. Kuye isifiso sakho, ungakwazi ukuphuma for izigaba ezilandelayo amakamelo:
Standard - egumbini umndeni evamile, okuyinto angazamukela abadala ababili nezingane izivakashi ezimbili.
Aphathimenti Executive nge uhlobo sea view umndeni.
Kathathu Room, okuyinto inokubukwa engadini.
Three embhedeni efulethini esibheke pool.
standard Umndeni ibhonasi encane a seascape.
Suite - ikamelo esikhethekile imibhangqwana Bridal.
amafulethi Double nge ukubukwa engadini.
Igumbi Double esibheke pool.
Alexandros Palace Ihhotela Suites (Greece) has a nice, amakamelo Tastefully ahlotshiswa. Zonke amafulethi une-othomathikhi air-conditioning, mini-bar, ayatfolakala, isiqandisi, iketela (kagesi), ushukela, itiye nekhofi ukwenza izindawo, satellite TV, hairdryer, eqondile Ukudayela ucingo, inthanethi wireless, ephephile (ngenkokhelo), electronic isicabha, yangasese zokugeza, Veranda noma kuvulandi.
Ihhotela lalungiswa ngo-2007 futhi ngo-2009. Alexandros Palace Ihhotela Suites iyindawo enhle okwesikhathi eholidini. Ukuba kude umsindo befuna, izivakashi eyinkimbinkimbi uzokwazi uphumule ngempela futhi ujabulele ukuthula onokuthula, okuyigugu entula izakhamuzi emadolobheni amakhulu.
Alexandros Palace Ihhotela Suites 5 * (iGreece, Halkidiki) has a nengqalasizinda athuthukiswe kahle. Ngaphakathi eziyinkimbinkimbi kukhona ezimbili angenasawoti okubhukuda, ithala ilanga, futhi ine zasendlini evuthayo yokubhukuda njengengxenye eziyinkimbinkimbi spa. Imihlangano yebhizinisi inikeza amakamelo amaningana yomhlangano, nemikhosi kungenziwa ihlelwe ballroom.
ekuphathweni eziyinkimbinkimbi akabakhohlwa mayelana izivakashi abanokukhubazeka. Alexandros Palace Ihhotela Suites amukela izivakashi ezifuywayo, kuncike ilungiselelo ngaphambi kanye icala olwengeziwe.
Izivakashi Ungahlala ukusizakala epaki imoto noma ukuqasha imoto. Uma kudingekile, etholakalayo ezomile yokuhlanza nelondolo amasevisi.
Ukuze izivakashi Alexandros Palace Ihhotela Suites 5 * usebenza ibha pool, umthamo bar yokudlela, lolwandle ibha, Tavern, ibha Classic. Lapha ungakwazi bajwayelane cuisine Mediterranean futhi ujabulele izitsha ngamazwe. Ibha Ihhotela likuvumela cocktail exotic ukunikeza okuphuzwayo kakhulu.
Isakhiwo has a esitolo futhi exchange encane.
Kulabo amaholide abakhetha ukuchitha isikhathi ngenkuthalo futhi ungahlali emhlabeni ogwini, Alexandros Palace Ihhotela Suites 5 * (Halkidiki) inikeza ithenisi enkantolo, volleyball, basketball, ibhola, ukuqasha ibhayisikili.
I emnandi kunazo ibhonasi Ihhotela kuba phambi isikhungo spa, okungukuthi amasevisi ungahlala ukusebenzisa. Ukuze ujabulele ngokugcwele iholide lakho futhi uphumule ukusiza massage, sauna noma ubhavu, Jacuzzi. Ungavakashela isikhungo imfanelo. Ngesikhathi sebehlezi ogwini, izivakashi ungakwazi ukujabulela zonke ezemidlalo amanzi atholakalayo.
Ngezikhathi zakusihlwa, siphile umculo ujabule beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni. Futhi uma ufuna izivakashi iningi asebenzayo Ungaqeda ngosuku ngesikhathi disco. Administration Inxanxathela enakekela yokuzilibazisa wakhe amaholide, ngakho waziphatha inhlangano Animators zokungcebeleka abadala.
Alexandros Palace Ihhotela Suites 5 * (Halkidiki) inikeza ezimbili OKWAKHETHWA iIgama, kuye ngokuthi izifiso zabo - ibhulakufesi nesidlo sakusihlwa noma ibhodi egcwele. Ukudla - kuba njalo isikhashana kubaluleke kakhulu ngamaholide. Ngaphezu kwalokho, umbuzo ukuhlolwa yokudla okunempilo ngokuya Izibuyekezo zihlale impikiswano, kungakhathaliseki ukuthi kuhle kangakanani kungaba. Namanje kuthinta Umbono siqu isivakashi ngasinye. Kubantu ngikhetha ikakhulukazi futhi ichithekile angahlala akuthola lokho hhayi niyajabula, ngisho ehhotela okunethezeka. Kepha Alexandros Palace Ihhotela Suites, ukubuyekezwa abonisa ukuthi amandla ihlelwe ezingeni kahle. izivakashi Hungry ungahlali, ungahlala ukhetha ezihlukahlukene ukudla eliningi angenamkhawulo. Kakhulu ukunconywa izivakashi yogurt ngesiGreki uju, okuyinto ungakwazi ukujabulela uphumule. Kwaselwandle wakhonza nsuku zonke, okuyinto eyenza izivakashi ukujabulela ezihlukahlukene izibiliboco. Ngokombono wabantu, labapheki - amakhosi izikebhe zabo, ukunakekela okukhethekile kufanele kube izitsha sweet. Ziyakwazi akunakwenzeka ukuba abeke phansi. Ngakho, ngenxa yezinyo laso sweet ipharadesi elingokoqobo. Isidlo sasekuseni sihlanganisa iphalishi, okuyinto ebaluleke kakhulu izingane. Ngakho-ke, ekuseni kufanele shesha, kungenjalo wena umane musa ukubamba. Futhi nemigoqo zendawo zokudla, wena umane ngeke oda. Ngakho kwaba kuhle emehlweni ukuthi iphuzu ukuthi labapheki wendawo banakekele izivakashi omncane.
Ezinye izihambeli ukusho ukuthi sasekuseni e standard ehhotela, njengoba besho, akukho frills, kodwa, nokho, eqotho kakhulu, ezengeziwe ngakho ukudla akekho idinga.
Kodwa sokudla zahlukahlukene kakhulu, kukhona yini ukukhetha futhi yini ukudla. izivakashi ongumpetha nomdlandla ikakhulukazi mayelana nama-dessert futhi bancome ukuzilinga. Njengomthetho, bathanda ngisho nalabo abanandaba amaswidi.
Ezinye izivakashi uncamela ukubhuka wena ihhotela kuphela ibhulakufesi kanye dinner futhi ube nesidlo sakusihlwa endaweni ethile yokucima ukoma njengoba usuku akusho njalo isikhathi ubuye ngesikhathi esimisiweyo hambo. Ngokuvamile, siphawula ukuthi labapheki ukunikela ngempela ezihlukahlukene izitsha ukuze izivakashi of the complex.
Okuvelayo kusukela ukuphumula - uhlobo image, ehlanganisa izingxenye ezincane, ingxenye ngayinye ngendlela yalo kubalulekile ukwakha umoya jikelele kanye nemizwelo. Futhi Ukudla idlala indima enkulu ekuphileni kwethu, ujabula kakhulu kangangokuba ihhotela ukhathalela izivakashi zabo, ngaleyo ndlela nabo ajabule, kanti imizwelo eyakhayo kakhulu.
Alexandros Palace Ihhotela Suites (Halkidiki) has a nice beach. Ihhotela Itholakala emgqeni wokuqala, okuyinto ekahle kakhulu. Beach kuyinto sandy, ehlanzekile futhi emnyango mnene olwandle. Seaside Resort, ukubuyekeza isikolo, ihlale ihlanzekile, ukungafuni nhlobo udoti, ngokusobala indawo bahlanza nsuku zonke, benze njalo abantwana, njalo pottering mayelana esihlabathini, ungakhathazeki.
Ngesikhathi sebehlezi ogwini kukhona ngokwanele elangeni loungers zonke izihambeli isikhala esanele. Kuye ngokulandelana ekwakheni uhlala, hamba uye olwandle kusukela imizuzu emithathu ukuze eziyisikhombisa ijubane kokuphumula. Kukhona yasebhange ngisho ukudlula ngaphansi. ujabula kakhulu ukuthi ihhotela igcina ubumsulwa ebhishi, njengoba kubalulekile kakhulu resort Ogwini lolwandle.
Sea kulezi zingxenye ihlale ihlanzekile futhi ethule. Nezingane, ungaya ngokuphepha futhi Ungakhathazeki ngalokho okungase kube kunesiphepho, amagagasi azenzeki lapha. Amanzi heats ngokushesha entwasahlobo, futhi ekupheleni kuka-May ungakwazi ukubhukuda. Yiqiniso, kule ehhotela kukhona amachibi uyabhukuda, kodwa isono ukuba ahlale eceleni kwazo, uma kukhona ulwandle ngemfudumalo nangobungane.
Izimpendulo ezivela izivakashi, lolwandle hhotela kufanele banconywe futhi uphelele iholidi ne izingane.
Ihhotela anakekela izivakashi omncane. Kubo, ebaleni lokudlala kwi-site zezingane, egijima izithombe club, nezinhlelo zokuzijabulisa e-ke izingane abakhuluma isiRashiya kukhona ngesiRashiya.
Kufanele kuqashelwe ukuthi akubona bonke abazali weneliseka umsebenzi we Animators, zikwenze uzitshele ukuthi izinhlelo ezimbalwa kakhulu ezinganeni. Abanye, kunalokho, sidumise club yezingane.
Ihhotela akanayo imenyu izingane ozinikele, sicela uqaphele ukuthi iphuzu, uma kungekho ukudla omdala ofanele kakhulu enganeni yakho. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi zonke izitsha Site izingane uma ufuna ukwazi ukuqhubeka ukuthi izingane uthanda.
Uhambo kanye Ezokuzijabulisa
Alexandros Palace Ihhotela Suites - lena indawo lapho uzokwazi ukukhohlwa mayelana umsindo befuna futhi ujabulele emkhathini ethulile zokuzilibazisa. Uma ufuna anomsindo nobunomoya ubusuku bonke futhi esebenzayo omdala izithombe, kufanele ufune kwenye indawo. Ihhotela Positioning ngokucacile ngokwayo yaba isikhungo ukuthi uyayithanda. Anakho ezinkulu, indawo enhle uhlaza. Kodwa leli hhotela itholakala endaweni esekusithekeni. amakhilomitha amahlanu kude kuyinto Ouranoupoli, futhi emizuzwini eyishumi kuyinto Tripiti port, lapho isikebhe ushiya njalo ngehora isigamu, amakhilomitha amabili elise edolobhaneni Nea Roda. Uma wayefisa, ungakwazi ngokushesha uthole iyiphi yalezi nemizana lapho kukhona taverna, izindawo zokudla, ukuvakasha, izitolo kanye nezitolo ezinkulu, kanye zokungcebeleka zayo ezithakazelisayo. izivakashi obunesithukuthezi eyinkimbinkimbi ngeke. Vele uqaphele ukuthi yonke ingqalasizinda okungenani bayo abaqhele ngamamayela ambalwa, okwenza leli hhotela endaweni ethule futhi ezolile kuze uphumule. Lapha ngeke zaphazanyiswa umculo kusukela imigoqo kanye zokudlela, ukungayeki ukulala kuze kube sekuseni.
Inzuzo enkulu ye eziyinkimbinkimbi siqu esikoleni diving zalo. Manje abantu abaningi umlutha diving, ngakho lokhu kuyithuba elihle okuhle, hhayi nje uphumule kodwa futhi ukuba sikujabulele ubuhle emhlabeni ngaphansi kwamanzi wendawo. Nature lapha yadalwa ukuze usithande, nobuhle kwamanzi - iyathinteka. Amanani e esikoleni kwamanzi ngempela yeningi.
Ngo May and June, leli hhotela ethule kakhulu, kukhona isixuku esikhulu izivakashi. Ngalesi sikhathi, beza lapha, njengoba umthetho, ama-pilgrim kanye nemindeni nezingane. Relaxing ku eziyinkimbinkimbi, ungavakashela isibalo esikhulu sezithunjwa uhambo futhi uthole izindawo ezingcwele, ngoba nje lokhu abantu lapha abaningi.
Ihhotela uhlela uhambo eminingi ezokwenza bajabulele ubuhle bendawo. Very interesting lwamahora amahlanu ukuvakasha ngokuthi "Cruise Athos," kukhona isimiso esihlelwe kahle ukuvakasha kuya sezindela sangakubo, ungavakashela Esilima Virgin oNgcwele, kanye ukuya eziphethwini ezishisayo e Aridi, lapho ungakwazi ukubhukuda esitsheni amanzi nge lokushisa lamanzi 37 degrees. Ngesikhathi yokwamukela ihhotela wena kuzosenza eziningi ongakhetha ukuhamba. Uma ufuna ukunikela ngesikhathi yezitolo, kungcono ukuya e Thessaloniki, Chalkidiki, kusukela azikho izitolo ezinkulu. Ngokuvamile, izivakashi ngeke miss ngisho noma olwandle ngeke ibe nemfudumalo kakhulu.
Kuyaphawuleka ukuthi leli hhotela - yindawo enhle imibhangqwana umndeni, honeymooners, abadala. Zonke izimenywa uzothola ukuzijabulisa angayithandi. Beautiful imvelo kanye lendawo ezikhangayo ngeke abashiye ubani nandaba.
Ngakho-ke kungaba ngokuphepha Kunconywa ukuphumula Alexandros Palace Ihhotela Suites 5 * izibuyekezo kokuphelele omuhle. Yiqiniso, njengoba kunoma iyiphi indawo, ukuphazamiseka ukwenzeka, nasekumeni holidaymakers kukhona izikhalazo, kodwa, ngokuvamile, eziyinkimbinkimbi ufanelwe ukuqashelwa.
Ihhotela inama endaweni enkulu kakhulu futhi iseduze kolwandle. Amanzi aphephile ukubhukuda kulezi zindawo bengekho ngokuphelele izakhamuzi kwamanzi eyingozi. Ezinye izihambeli ukuthi amakamelo bahlanza kahle, kodwa abaphathi uncoma zonke izindlela ukuxhumana imibono yabo, okuyokwenza ngangokunokwenzeka ukuze akuqede ngokushesha. Njengoba ngayo ukuhlanzeka ogwini insimu, azikho izikhalo, bonke izivakashi ziyaneliswa kakhulu. Kusihlwa ohlelweni abadala ukuzijabulisa kaningana ngesonto, nobusuku ngesiGreki masonto onke ihlelwe, futhi ungakwazi ukujabulela umculo bukhoma.
Uma nje kwenzeka ulingeka ngumuntu ezolile ukuphumula elinganisiwe phezu kolwandle sizungezwe nature enhle, kufanele nakanjani vakashela leli eziyinkimbinkimbi. Kwamjabulisa yokuthi ngaphezu ukuzilibazisa zasolwandle kungenzeka ukuvakashela ukuvakasha kanye ubone izinto. Ngezinye izikhathi amaholide phesheya, abanye izivakashi ukhawulelwe yokuthi ngaso sonke isikhathi abasichitha kodwa esizeni. Athos kuyinto enhle ukuze ngokuqinisekile iyoba kudingeka sibheke. It is ibuye Kunconywa ukuvakashela Thessaloniki, lapho uyobe hit inala ezikhangayo ukuthi zitholakala yonke indawo. Ungakwazi abasaya nesitolo sakhe, emakethe, uma kwenzeka endaweni yokudlela, lapho ezihlukahlukene omkhulu lapha.
Kulesi sihloko esiye sazama ukukutshela okwengeziwe mayelana kwelinye lamahhotela engcono eGreece. Sithemba ukuthi ulwazi kuyoba usizo kulabo abakhetha indawo ukuze uhlale kulelizwe emangalisayo, futhi kuzokusiza ukwakha umbono eziyiqiniso kakhulu.